KAREN NATIONAL LEAGUE (JAPAN): 17/06/2012
အိန္ဒိယမှ ရခိုင်ကရင် ရဲဘော် ၃၁ ဦး နယ်သာလန်သို့ ထွက်ခွာမည်
BPHWT ဒါရိုက်တာ စောဝင်းကျော် Van Heuven Goedhart ဆုဆွတ်ခူးရရှိ
ဇွန်လ ၁၈ရက်၊ ၂၀၁၂ခုနှစ်။ စောခါးစူးညား (ကေအိုင်စီ)
နယ်သာလန်နိုင်ငံ Stichting Vluchteling အဖွဲ့မှ ပေးအပ်သည့် ၂၀၁၂ခုနှစ်အတွက် Van Heuven Goedhart Award ဆုကို နယ်လှည့်ကျောပိုးအိတ်ကျန်းမာရေးလုပ်သားများအဖွဲ့-BPHWT ဒါရိုက်တာ စောဝင်းကျော်က ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့သည်။
ကရင်ပြည်နယ်တွင် တိုက်ပွဲများအကြား အတိဒုက္ခရောက်နေသော ဒေသခံလူထုများအတွက် ကျန်းမာရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဦးဆောင်မှုကဏ္ဍ စသည့် နည်းလမ်းပေါင်းမျိုးစုံဖြင့် ဆယ်စုနှစ်ကျော် စွမ်းဆောင်ခဲ့သည့် စောဝင်း ကျော်အား ယင်းဆုကို ပေးအပ်ရန် Stichting Vluchteling အဖွဲ့က ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ဆုအပ်နှင်းပွဲအခမ်း အနားကို ဇွန်လ ၁၆ရက်နေ့က ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် မဲဆောက်မြို့တနေရာတွင် ကျင်းပခဲ့သည်။
ဆုလက်ခံရရှိသွားသည့် စောဝင်းကျော်က “ဒီဆုကို ရတာတော့ အရမ်းပျော်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော် တစ်ယောက်တည်းကောင်းလို့ ရတယ်လို့ မယူဆပါဘူး။ ကျနော့်ရဲ့ ဘက်ဖက်(BPHWT) လုပ်ဖော်ကိုင် ဖက်တွေရဲ့ ကူညီပံ့ပိုးမှုတွေ အများကြီးပါ လို့ ရတယ်လို့ပဲ ပြောပါရစေ။ ဘောလုံးအသင်း တသင်းလိုပေါ့။ တယောက်ကောင်းလို့ မရပါဘူး။”ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
ယင်းဆုကို ရရှိခြင်းအားဖြင့် ၎င်းတို့ BPHWT အဖွဲ့အတွက် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များ လုပ်ဆောင်ရာတွင် တွန်းအား တခုဖြစ်သကဲ့သို့ ရှေ့ဆက် လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ပိုမိုထိရောက်ရန်အတွက် ကိုယ့်ကိုယ် ကို အနစ်နာခံသည်ဟု မခံယူဘဲ အမျိုးသားရေးအတွက် အလုပ်လုပ်သည်ဟု ခံယူကာ အားလုံးပါဝင်ကြရန် လည်း စောဝင်းကျော်က တိုက်တွန်းသွားခဲ့သည်။
Stichting Vluchteling အဖွဲ့က နယ်သာလန်နိုင်ငံမှ နေ၍ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် မဲဆောက်မြို့ အထိလာရောက် ကာ ဆုပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားနှင့်တကွ ကျင်းပခဲ့ပြီး စောဝင်းကျော်အား ဂုဏ်ပြုဆံဆိပ်အပါအ၀င် ကျန်းမာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆက်လုပ်ရန် ဥရောပ ယူရိုငွေ ၅၀,၀၀၀ ပေးအပ်ခဲ့သည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် ကရင်ပြည်နယ် ဖာပွန်ဒေသရှိ ဒေးဖိုးနိုနှင့် ဟိုကေစသည့် နေရာများတွင် BPHWT ဆေးခန်း များ ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီး ယခု ရရှိသွားသည့် ဆုငွေများကို ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း အသုံးပြုသွား မည်ဖြစ်သလို ကချင်ဒေသက ဒုက္ခသည်များကိုလည်း အကူအညီအချို့ပေးသွားမည်ဟု စောဝင်းကျော်က ပြောသည်။
စောဝင်းကျော်သည် ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း ဝေးလံခေါင်းပါးသည့် ဒေသများတွင် ကျန်းမာ ရေးလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ကာ မြေမြှုပ်မိုင်း ထိသူများ၊ လက်နက်ကြီးငယ် သေနတ်ထိသူများစွာကို ကုသပေးခဲ့ သည့်အပြင် ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် အခြေခံဆေးသင်တန်းများ၊ ပညာရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ဦးဆောင်စီ မံခန့်ခွဲမှုများ လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်ဟု ဆုပေးသည့် အဖွဲ့က ထောက်ပြပြောဆိုခဲ့သည်။
၂၀၀၁ခုနှစ်က Van Heuven Goedhart ဆု ရရှိခဲ့သည့် BPHWT ၏ ဥက္ကဌ ဒေါက်တာစင်သီယာမောင်က လည်း “BPHWT လုပ်ငန်းတွေ ပြန်ကြည့်ရင် စစ်ဖြစ်နေတဲ့ ဒေသမှာ နိုင်ငံတကာ ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေ လက် လှမ်းမမှီဘူးလေ။ အစိုးရရဲ့လျစ်လျူရှုမှုခံနေရတဲ့သူတွေကို ကုသမှုတခုတည်း မဟုတ်ဘဲ ကျန်းမာရေးအရည် သွေးမြင့်မားဖို့နဲ့ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့တွေ ကြားထဲမှာ ပူးပေါင်းမှုတွေ ကောင်းမွန်လာအောင် ဆောင်ရွက်တဲ့အတွက် ကြောင့် BPHWT အားလုံးရဲ့ကိုယ်စားနဲ့ ဆရာဝင်းကျော်အတွက်ရော ကျမတို့ ဂုဏ်ယူပါတယ်။” ဟု ပြောသည်။
ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားတွင် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်အခြေစိုက် ကရင်လူမှုရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့များ၊ ကျောင်းသူကျောင်း သားများနှင့် ဖိတ်ကြားထားသော ဧည့်သည်တော်များအပါအ၀င် ပရိဿတ် ၂၀၀ ကျော် တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ကျောင်းသူကျောင်းသားများက မြန်မာနိုင်ငံ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံအက၊ ကရင်ဒုံးယိမ်းအက၊ မြန်မာတပင်တိုင် အကနှင့် ကရင်လူမျိုး၏ ဓလေ့ရိုးရာနှင့် လုပ်ကိုင်စားသောက်မှုဆိုင်ရာ သရုပ်ဖော်ခြင်း စသည့်တို့ကို တင်ဆက်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။
Van Heuven Goedhart ဆုသည် နယ်သာလန်နိုင်ငံ၏ ၁၉၅၁ခုနှစ်တွင် ပထမဦးဆုံး ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးလည်းဖြစ်၊ ၁၉၅၄ခုနှစ်တွင် နိုဘယ်လ်ဆု ရရှိသူလည်းဖြစ်သည့် Gerrit Van Heuven Goedhart ကို ရည်စူး၍ ကမ္ဘာတ၀ှမ်းရှိ စစ်ပွဲများအကြား ဒုက္ခရောက်နေသော လူထုများကို လိုက်လံ ကူညီပေးနေသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များအား အသိအမှတ်ပြုသည့်အနေဖြင့် ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်သည့် ဆုဖြစ်သည်။
နယ်သာလန်နိုင်ငံ၌ ၁၉၇၆ခုနှစ်တွင် Van Heuven Goedhart ဆုကို ပေးသည့် Stichting Vluchteling အဖွဲ့ကို စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
Stichting Vluchteling အဖွဲ့မှ ပေးသည့် ဆုရရှိသွားသော စောဝင်းကျော်သည် ၁၉၈၈ ခုနှစ် ကျောင်းသား အရေးတော်ပုံတွင် ပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး ထိုမှတဆင့် ယခင် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး-KNU ဌာနချုပ် မာနယ် ပလောသို့ ရောက်ရှိလာကာ ၁၉၈၉ခုနှစ်မှစ၍ ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းအပါအ၀င် ကရင်ပြည်နယ်နှင့် ထိစပ်သည့် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်တလျှောက်ရှိ ပြည်တွင်း ဒုက္ခသည်များကို လိုက်လံဆေးကုသမှုပြုလုပ်ရင်း ကျန်းမာရေး လုပ်ငန်းနှင့် အခြားဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်နေသည်မှာ ယခုချိန်ထိ ဖြစ်သည်။
ရသေ့တောင် ရခိုင် တိုင်းရင်းသား ၁၁ ဦး အလောင်း ကို လွှဲ ဘင်္ဂါလီ တွေ လွှဲမပေး
ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့ နံနက် ပိုင်း က ရခိုင် တိုင်းရင်းသား များ နှင့် ဘင်္ဂါလီ တိုင်းရင်းသား
များ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွား စဉ် အသတ် ခံ ခဲ့ ရသည့် တိုင်းရင်းသား ရခိုင် ၁၀ ဦး ၏ အလောင်း ကို ဘင်္ဂါ လီ
များ က လွှဲပြောင်း ပေး အပ် ခြင်း မပြု သေး ဟု FNG မှ စုံစမ်း သိရှိ ရသည်။
ရခိုင် ပြည် နယ် ရသေ့ တောင် မြို့နယ် ကူတောင် ရွာ ကို ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့ နံနက် အစော ပိုင်း က
ဘင်္ဂါ လီ ရိုဟင်ဂျာ များ တုတ် ဓါး စသည့် လက်နက် များ ဖြင့် ၀င်ရောက် လာ ပြီး ရွာ ကို မီး ရှို့ခဲ့ ခြင်း
ကူတောင် ရွာသား များ က ဘင်္ဂါ လီ များ ကို ပြန်လည် ခုခံ ရာ တွင် ဘင်္ဂါလီ များ ၏ သတ်ဖြတ် မှု ကြောင့်
ကူတောင် ရွာ မှ ရခိုင် တိုင်း ရင်းသား ၉ ဦး သေဆုံး ပြီး အခြား ရွာ သား ၂ ဦး သေဆုံးသည် ဟု ဘူးသီး
တောင် ဆေးရုံ မှ တာဝန် ရှိ သူ တစ်ဦး က FNG ကို ပြောသည်။ အဆို ပါ ပဋိပက္ခ အတွင်း ဘင်္ဂါလီ နှစ်ဦး
ဘူးသီးတောင် ၊ ကူတောင် နှင့် ရသေ့တောင် မြို့ များ မှ သံဃာ တော် များ နှင့် ရသေ့ တောင် အခြေစိုက်
စစ်တပ် မှ ဘင်္ဂါလီ ကျေး ရွာ ကို သွား ရောက် ပြီး သေဆုံး သူ ရခိုင် တိုင်းရင်းသား များ ၏ အလောင်း
ကို လွှဲ ပေး ရန် တောင်း ဆိုသော် လည်း ယနေ့ ဇွန်လ ၂၀ ရက်နေ့ညနေ ထိ လွှဲ ပြောင်း ပေး အပ် ခြင်း
မပြု ဟု သိရသည်။
ရခိုင် ရွာ ကို မီးရှို့ မှု နှင့် ရခိုင် တိုင်းရင်းသား ၁၁ ဦး ၏ အလောင်း ကို လွှဲ မပေး သောကြောင့် ထို ဒေသ တစ်
၀ိုက် တွင် အခြေ အနေ တင်းမာ လျှက် ရှိ သော် လည်း စစ်တပ် ရဲ စသည့် လုံခြုံရေး အင်အား နည်း ပါ ပြီး
ကြီးမား သည့် ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွား ခဲ့ လျှင် ထိမ်းသိမ်း နိုင်စွမ်း မရှိ ဟု ရသေ့ တောင် မြို့ပညာရေး ၀န်ကြီး
ဌာန မှ ၀န်ထမ်း တစ်ဦး က ပြောသည်။
ဘင်္ဂါ လီ ရိုဟင် ဂျာ များ က သတ် ဖြတ်မှု ကြောင့် သေဆုံး သူ များ တွင် ကျောင်း ဆရာ နှစ်ဦး နှင့် အမျိုးသမီး
နှစ် ဦး လည်း ပါဝင်သည်။
ပြီးခဲ့ သည့် သီတင်း ပတ် အတွင်း ရခိုင် ပြည်နယ် တွင် မငြိမ်သက် မှု များ ကြောင့် လူ ၅၀ ကျော် သေဆုံးပြီး
၂၀၀ ကျော် ဒဏ်ရာ ရရှိ ကာ နေအိမ် အလုံးပေါင်း ၂၅၀၀၀ ကျော် ပျက်စီးခဲ့ သည်။
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 8:49 AM No comments:
“ငါတို့သည် ကျဆုံးလေပြီးသော တပ်မတော်သားတို့၏ သစ္စာကို စောင့်သိ ရိုသေပါမည်။”
ဗမာပြည်မှာ စစ်တပ်ကအာဏာယူထားတာ အနှစ်ငါးဆယ်တင်းတင်း ပြည့်ပါတော့မယ်။ ဒါ ၁၉၅၈ ခုနှစ် ကြားဖြတ်အစိုးရ အာဏာသိမ်းထားတဲ့ ၂နှစ် ကျော်ကာလ မပါသေးပါဘူး။ ဗမာပြည်သားတွေအဖို့တော့ ၅၈ ခုနှစ်တုန်းက စည်းကမ်းရှိရေး နဲ့ ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေး အလေးထားတဲ့အစိုးရ၊ ၁၉၆၂ ခုနှစ်တုန်းက ဆိုရှယ်လစ်လောက တည်ဆောက်မယ့်အစိုးရ၊ ၁၉၈၈ ခုနှစ်တုန်းက နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးကို အလေးထားတဲ့ အစိုးရ၊ အခုအခါမှာ လွှတ်တော်ဒီမိုကရေစီ တည်ထောင် မယ့် အစိုးရ စသဖြင့် ဗိုလ်နေဝင်း-ဗိုလ်မောင်မောင်-ဗိုလ်အောင်ကြီးတို့ကစလို့ ဒီကနေ့ ဗိုလ်သိန်းစိန်-ဗိုလ်မင်းအောင်လှိုင် စသူတို့အထိ စစ်အုပ်စုအသီးသီးရဲ့ စစ်အစိုးရမျိုးစုံကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ကြွေးကြော်သံ အမျိုးစုံကိုလည်း ကြားခဲ့ရပါတယ်။ ၁၉၅၈ ခုနှစ် ကြားဖြတ်အစိုးရနဲ့ ၁၉၆၂ ခုနှစ်တော်လှန်ရေးကောင်စီ စတာတွေတုန်းက သတင်းစာအဖုံးတွေမှာ မျက်နှာ ထားတင်းတင်းနဲ့ စစ်ယူနီဖောင်း ဝတ်ထားသူတွေကိုတွေ့ခဲ့ရပြီး မဆလခေတ်နဲ့ ဒီနေ့ကာလမှာတော့ ဟန်ဆောင်အပြုံး တွေနဲ့ တိုက်ပုံဝတ်၊ ခေါင်းပေါင်း ဆောင်းထားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုတွေ့ရပါတယ်။
ဗမာပြည်မှာ စစ်အစိုးရတွေတခုကနေ နောက်တခုကိုပြောင်းတာဟာ သူတို့ချင်း ကွဲပြဲပြီးဖယ်ရှားပစ်တာ၊ ဖြုတ်ပစ်တာ မ ဟုတ်ဘူးဆိုတာ သတိပြုသင့်ပါတယ်။ ကိုယ်ဆက်အုပ်ချုပ်လို့မဖြစ်တော့လို့ ကိုယ်ယုံကြည်ရာတဦးကိုလွှဲပြောင်းပေး ခဲ့ တာချည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ဒီလို စစ်အုပ်စုမင်းဆက်တခုနဲ့တခု အစားထိုးရာမှာ နောက်တက်လာသူဟာ ကိုယ့်ရှေ့က လူလုပ်ခဲ့တာတွေထဲက ကိုယ့်အာဏာတည်မြဲရေးအတွက် အသုံးမတည့်တော့တဲ့၊ ဒါမှမဟုတ်အတားအဆီး အနှောက်အ ယှက်ဖြစ်မယ့် အရာတွေကို ဖယ်ရှားပြီး အသုံးကျမယ့်အရာတွေကိုထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်။ ဥပမာဆိုရင် နဝတ နဝတ နဝတ -နအဖ နအဖ နအဖ စစ်အုပ်စုဟာ ဗိုလ်နေဝင်းရဲ့ မဆလဆိုင်းဘုတ်ကို အမှိုက်ပုံးထဲလွှင့်ပစ်ပြီး ဗိုလ်နေဝင်းရဲ့ တပ်မ တော်သာ အမိ၊ တပ်မတော်သာ အဖဆိုတာကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်။
အခုဗိုလ်သိန်းစိန်တို့ရဲ့ ကြံ့ဖွတ်စစ်အုပ်စုကတော့ ဗိုလ်သန်းရွှေ ရွှ လုပ်ခဲ့တဲ့ စနစ်တွေကိုစွန့်ပစ်လိုက်ပြီလို့ပြောပြီး ဗိုလ် သန်းရွှေတို့ ချမှတ်ခဲ့တဲ့ “တပ်မတော်ရဲ့ ဦးဆောင်မှုအခန်း”၊ ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ စတာတွေကိုတော့ ဆက်ခံ ထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်။ တပါတည်းမှာ စကားလုံးအသုံးအနှုန်း အပြောင်းအလဲလေးတွေတချို့ကိုလည်း သကာလူးသလို လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
အလားတူပဲ နောက်တက်တဲ့စစ်အုပ်စုဟာ ရှေ့ကဆင်းသွားတဲ့စစ်အုပ်စုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့၊ ဒါမှမဟုတ်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ ဥစ္စာဓ န တွေကို လက်ဖျားနဲ့မတို့ဘဲ တည်ရှိခွင့်ပေးရပါတယ်။ စစ်ဗိုလ်ချင်းအားဏာလွှဲတာမပြောနဲ့ ၁၉၅၈ ခုနှစ် ကြားဖြတ် အ စိုးရကနေ ဦးနုရဲ့ပထစအစိုးရကို အာဏာလွှဲပေးတဲ့အခါမှာ ကြားဖြတ်အစိုးရကာလမှာ တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ဒီအက်စ်အိုင် (D.S.I.) ဘီအီးဒီစီ (B.E.D.C) စတဲ့ စီးပွားရေး အဆောက်အအုံကြီးတွေနဲ့ အဲဒါတွေရဲ့ အစွယ်အပွားတွေကို နောက်အစိုးရက လက်ဖျားနဲ့တောင် မတို့ဝံ့ပါဘူး။ ဦးနုရဲ့အစိုးရဟာ ကတိပေးအာမခံထားသလား အောက်မေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဗိုလ်နေ ဝင်း က ဆိုရှယ်လစ်စကားလုံးနဲ့ ရိုက်စားလုပ်တဲ့အခါကျတော့ D.S.I., B.E.D.C ပိသုကာတွေဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်အောင်ကြီးတို့နဲ့ ကွဲပါတော့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဗိုလ်နေဝင်းတို့ မဆလခေတ်ထိပ်သီးတွေက တခြားသူတို့နည်း သူတို့ဟန် တွေနဲ့ သူတို့ဓနကို တဖြည်းဖြည်း ပြန်တည်ထောင်ပါတယ်။ နဝတ နအဖ လက်ထက်ကျတော့ ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီကအစချီပြီး တည်ထောင်လိုက်၊ ပွားများလိုက်တာ တတိုင်းပြည်လုံး ရေပြင်၊ မြေပြင်၊ ဝေဟင်၊ သူတို့ စစ်တပ်ပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တွေဟာ လက်ညှိုးထိုးမလွဲဖြစ်လာပါတော့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ဗမာပြည်မှာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်သက်တမ်းရှည်လာတာနဲ့အမျှ ဒီစနစ်အပေါ်မှီပြီးပေါ်ပေါက်လာတဲ့ စစ်တပ်နဲ့ စစ်တပ်အသိုင်းအဝိုင်းတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ ဓနအဆောက်အအုံကြီးဟာလည်း ကြီးမားသထက်ကြီးမားလာတယ်လို့ ပြောရ ပါမ ပါမပါမ ယ်။ အခုဆိုရင် ဗမာနိုင်ငံစီးပွားရေးရဲ့ ဓနဥစ္စာရာခိုင်နှုန်း ရှစ် ဆယ် လောက်ကိုစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်သူ၊ ပတ်သက်ဖူးသူ၊ နီးစပ်သူတွေက ပိုင်ဆိုင်တယ်ဆိုရင် မှားမယ်မထင်ပါဘူး။
ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီတခုတည်းရဲ့ဓနဟာ အရင် D.S.I., B.E.D.C တို့ထက် အဆပေါင်းများစွာကြီးနေပါပြီ။ ဒီလိုဖြစ်လာတာရဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းကတော့ စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ သက်တမ်းရှည်လာလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အရင်းအနှီးဆိုတာ အမြဲတိုးချဲ့နေမှရေရှည်တည်တံ့နိုင်တာပါ။ ဒီတော့စစ်အုပ်စုရဲ့အရင်းအနှီးတွေတိုးချဲ့ဖို့ စဉ်း စားရပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာထပ်မြှုပ်နှံဖို့ မလွယ်တော့ပါဘူး။ ပြည်ပကိုသွားမြှုပ်နှံမှ၊ ပြည်တွင်းမှာလည်း ပြည်ပနဲ့ပူးပေါင်း မြှုပ်နှံမှဆိုတဲ့အခြေအနေရောက်လာပါတယ်။ ဒီအခါမှာ အနောက်နိုင်ငံတွေကပိတ်ဆို့မှုတွေ ဖွင့်ပေးဖို့ဟာသူတို့အတွက် သေရေးရှင်ရေးလိုအရေးကြီးလာပါတော့တယ်။
တကယ်တော့ တိုင်းပြည်တပြည်ကို ရာစုနှစ်တဝက်ဆက်တိုက်အုပ်စိုးတဲ့ မင်းဆက်ဆိုတာ သမိုင်းမှာနှယ်နှယ်ရရ မဟုတ် ပါဘူး။ ပြောရရင် ဒုတိယကုန်းဘောင်မင်းဆက်ထက် နှစ်ဆကြာပါတယ်။ ဒီလောက်အကြာကြီး အုပ်စိုးလာတော့ စစ်တပ် က အထက်မှာနေတယ်ဆိုတာဟာ အစဉ်အလာတခုလို ဖြစ်လာယုံမက ခေါင်းထဲမှာအရိုးစွဲသွားတဲ့ စဉ်းစားနည်းတခု လည်း ဖြစ်လာပါတယ်။ တပါတည်းမှာ ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေအဖို့ ကိုယ့်ရဲ့အထက်အဆက်ဆက်က စစ်အာဏာရှင်များ ကို လေးစားကိုးကွယ်ရတာ၊ သူတို့ ရဲ့ဂုဏ်နဲ့သစ္စာကိုစောင့်ထိန်းရတာတွေပေါ်လာပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင်တွေ တ ယောက်ပြီးတယောက် ပြောင်းခဲ့ပေမဲ့ သူတို့အနေနဲ့ သူတို့အရင်က စစ်အာဏာရှင်တွေကို ဘယ်တော့မှမကောင်း မပြော ကြောင်း သတိထားမိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ “ငါတို့သည် ကျဆုံးလေပြီးသော တပ်မတော်သားတို့၏ သစ္စာကို စောင့်သိ
ရိုသေပါမည်” ဆိုတာဟာ တပ်မတော်ကိုအာဏာကိုင်ထားသူများဖြစ်အောင် ဖန်တီးခဲ့သူများအပေါ် သစ္စာစောင့်သိရိုသေ
ပါမယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ် ဖြစ်ပါတယ်။
တဖက်ကပြန်ပြောရင်တော့ သူတို့ဟာ အထက်အဆက်ဆက်က စစ်အုပ်စုများရဲ့ အစဉ်အလာတွေကို ထိန်းသိမ်းတာ၊
ကာကွယ်တာဖြစ်တယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယူဆလာကြပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့အယူသည်း ဘာသာရေးဂိုဏ်းတွေရဲ့ အစွဲအလမ်း မျိုးလို ဖြစ်လာကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ စဉ်စားမှုအားလုံးအခြေပြုတဲ့ အစပြုတဲ့ အခြေခံတခု (mindset)တခုဖြစ်လာပါတယ်။ စစ်တပ်ဟာ နတ်ဘုရားလို ဖြစ်လာပါတယ်။ဒီနေ့အခါမှာ ဗိုလ်ချုပ်ဦးသိန်းစိန်ကို အမိန့်ပေးနေတာဟာ ဗိုလ်သန်းရွှေ ဖြစ် တယ်လို့ အတိအကျမပြောနိုင်ပေမဲ့ အခုပြောခဲ့တဲ့ စစ်တပ်နတ်ဘုရားရဲ့သစ္စာကိုတော့ သူတို့မလွန်ဆန်နိုင်၊ မလွန်ဆန် ဝံ့ပါဘူး။ ဒါဟာသူတို့အသွေးအသားထဲထိ စိမ့်ဝင်နေတဲ့ယုံကြည်မှုတရပ် ဖြစ်နေပြီး တချို့ဆိုရင် ဒီဟာကို ရိုးရိုးသားသား ယုံကြည်နေတာလို့တောင် ပြောလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီနေရာမှာ အောက်ခြေတပ်သားတွေ၊ အရာရှိငယ်တွေမှာ ဒီလိုအတွေးအခေါ်၊ အယူအစွဲမျိုး မရှိဘူးဆိုတာ
ထောက်ပြဖို့ လိုပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဘာမသိ ညာမသိနဲ့ပဲ အထက်က စစ်အုပ်စုအစဉ်အလာဆက်ခံသူတွေကို ကုန်းပိုး
ထားကြရတာပါ။ ဒီလို စစ်အုပ်စုအဆက်ဆက် ပြောင်းလဲအုပ်စိုးနေလို့ သူတို့ဘဝဟာ ဘာမှထူးမလာပါဘူး။ သေစရာရှိရင်
ထောင်ဒဏ်တသက်တကျွန်းကျ အီဂျစ်အာဏာ၇ှင်ဟောင်း မူဘာရက် ကွယ်လွန်
ကိုးဒီသွေး on Wednesday, June 20, 2012
မြောက်ကိုးရီးယားခေါင်းဆောင် အာဏာရှင် ကင်ဂျုံအီ သေဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်
ထောင်ဒဏ် တသက် တကျွန်း ကျခံနေရတဲ့ အီဂျစ် သမ္မတဟောင်း ဟိုစနီ မူဘာရက်ဟာ မနေ့ ည က နှလုံးလည်း ရပ်သွားပြီး အသက် ဆုံးပါးသွားရတယ်လို့ ဆရာဝန်တွေက ပြောတာကို အီဂျစ် ရုပ်မြင်သံကြားတို့ကလည်း ကြေညာသွားပါတယ်။
အခုအခါမှာ ခန္ဓာကိုယ်က ဘာမှ အလုပ်မလုပ်တော့ဘဲ သူ့ ကို စက်ကရိယာများနဲ့သာ အသက်ကို ထိမ်းသိမ်းထားရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အသက် ၈၄ နှစ်အရွယ် မူဘာရက် ဟာ လေဖြတ်ရောဂါကို ခံစားနေရရင်း လွန်ခဲ့တဲ့ ဇွန်လ ၂ ရက်နေ့ကပဲ တရားရုံးက သူအာဏာရှိစဉ်က ဆန္ဒပြသူများ သေဆုံးခဲ့ရမှု တို့အတွက် ထောင်ဒဏ် တသက်တကျွန်း ချမှတ်ခံ ထားရသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာအာဏာရှင် သန်းရွှေကတော့ အသက်ရှင်လျှက်ရှိကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။
ကဲ....ဒီတစ်ခါတော့ မင်္ဂလာဆောင်ကြမယ့် သတို့သား သတို့သမီး တို့ တင့်ကားကြီးစီးပြီး မင်္ဂလာဆောင်ကို သွားဖို့ အတွက် မင်္ဂလာဆောင် ဇိမ်ခံတင့်ကားကြီးကို ငှားရမ်းပေးတဲ့ ကုမ္ပဏီ ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါတယ်.... သူများနဲ့မတူအောင် ထူးထူးခြားခြားမင်္ဂလာဆောင်ချင်သူများအတွက် အထူးအပြင်အဆင်တွေနဲ့ အလှဆင်ထားပါတယ်....အဲဒါကြီးစီးပြီး မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကို သွားတော့ လူရှိန်တာပေါ့.... ငှားရမ်းလို့ ရတဲ့ နေရာကတော့ အင်္ဂလန်မှာတဲ့ဗျား
ကရင်ဘာသာ ရုပ်သံသတင်း (ဇွန်လ တတိယပတ်)
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 8:51 AM No comments:
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြားခဲ့သော မိန့်ခွန်း ဘာသာပြန် စဆုံး facebook မှကူးယူပါသည်။
by Ba Nyar on Sunday, June 17, 2012 at 8:28am ·
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တော်ကြာတုန်းက ဒါကတစ်ခါတစ်လေလည်း ဟိုးဘ၀ပေါင်းများစွာတုန်းကလို ထင်မိပါတယ်… ကျွန်မ အောက်စဖို့မှာ နေနေတုန်း Desert Island Discs လို့ခေါ်တဲ့ ရေဒီယို အစီအစဉ်လေးကို ကျွန်မရဲ့သားငယ် အလက်ဇန္ဒားနှင့် အတူတူ နားထောင်ခဲ့ဖူးတယ်။ ဒီရေဒီယိုအစီအစဉ်က တော်တော်လေး လူကြိုက်များပြီး ကျွန်မသိသလောက် အခုချိန်ထိ ဆက်လက်ထုတ်လွှင့် နေတယ်ဆိုပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်မှဆိုရင် လူတန်းစားပေါင်းစုံက ကျော်ကြားသူတွေကို ဖိတ်ကြားပြီး ဓါတ်ပြား ရှစ်ချပ်စာလောက် ဆွေးနွေး ပြောကြားကြတယ်။ ဒီအကြောင်းတွေကို ထုတ်ထားတဲ့ စာအုပ်ဟာဆိုရင် သမ္မာကျမ်းစာနှင့် ရှိတ်စပီယား ၀တ္ထုတွေလောက် ရောင်းအားသွက်ခဲ့ပါတယ်ပြီး လူသူအရောက်အပေါက်နည်းတဲ့ ကျွန်းမှာတစ်ယောက်တည်း ကျန်ခဲ့ရင်တောင် ကိုယ်နှင့်မကွာ ရှိနေစေချင်ကြတဲ့ အမြတ်တနိုးပစ္စည်း အသုံးအဆောင်လို့တောင် ဆိုကြပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်ကိုနားထောင်လို့ အပြီးမှာ သားလေးကကျွန်မကို မေမေ တစ်ချိန်ချိန်မှာ မေ့မေ့ကို Desert Island Discs မှာ ဒီလိုပြောခွင့် ရမယ်လို့ထင်လား လို့မေးပါတယ်။ ဘာလို့မရ မလဲ ဟု-----
ကျွန်မက ခပ်အေးအေးပဲ ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ သားလေးက ဒီအစီအစဉ်တွေကို ယေဘုယျအားဖြင့် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားတဲ့သူတွေပဲ ပါဝင်နိုင်တယ်ဆိုတာ သိရက်နှင့်ပင် ကျွန်မကို ဘာအတွက်ကြောင့် မေမေ့ကိုဖိတ်မယ်လို့ ထင်တာလဲလို့ ရိုးရိုးတန်းတန်းသိချင်တဲ့ သဘောနဲ့ ဆက်မေးခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မခဏလောက်စဉ်းစားလိုက်တယ် ပြီးမှ မေမေက စာပေဘက်မှာ နိုဘယ်ဆုရခဲ့ရင်ပေါ့ သားရယ်လို့ ပြောပြီး ကျွန်မတို့ ၂ ယောက်စလုံး ရယ်လိုက်ကြပါတယ်။ မှန်းချက်ကတော့ ဟုတ်နေတာပဲ ဒါပေမယ့်တကယ်ဖြစ်လာဖို့သာခက်တာပ
မင်္ဂလာမွေးနေ့ (၆၇) သီချင်းသစ်လေး။
မြင့်မိုရ်တောင်မက ကျေးဇူးကြီးမားတဲ့ အမေ "ဒေါ်စု" ကို ငါတို့ ဘယ်လိုကျေးဇူးဆပ်ရမလဲ။ တိုင်းပြည်ပေါ် သစ္စာရှိပြီး ပင်လုံစိတ်ဓါတ်နှင့် ဘာသာ ၃ ဘာသာလေးစားမယ်ဆိုရင် အမေ ကျေနပ်မှာပါ။
လားရှိုး (ဦး)သိန်းအောင် ရဲ့ မင်္ဂလာမွေးနေ့ (၆၇) သီချင်းသစ်လေး။
ကျပ်တသောင်းတန် အပေါ် သူတို့ အမြင်
Published on Jun 15, 2012 by BurmaVJMedia
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျပ် တသောင်းတန် ငွေစက္ကူတွေကို ဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့မှာ နိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကနေ စတင် ထုတ်ဝေတော့မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဇွန်လ ၇ ရက်နေ့မှာ မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားကနေ တရားဝင် သတင်း ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ အခုလို ကျပ် တသောင်းတန် ထုတ်ဝေတော့မယ့် အပေါ် စီးပွားရေးပညာရှင်၊ လုပ်ငန်းရှင်၊ ယာဉ်ပိုင်ရှင် စတဲ့ လူတန်းစား အလွှာအသီးသီးမှ သူတို့ရဲ့ သဘောထားအမြင်တွေကို ဖော်ပြထားပါတယ်။
Sunday, 17 June 2012 04:30
+2 #18 bota 2012-06-17 16:07
#12 အညာသား 2012-06-17 13:46
ဒီလောက်အရေးကြီး တဲ့အချိန် ဒီနေရာမှ မြန်မာရေတပ်စစ်သ င်္ဘော တစီးပဲရှိတယ်တဲ့ လားဗျာ.. တော်တော်တော့ဗျူ ဟာမြောက်နေပါပီ..
စိုက်မတိုက်ခင် စိုက်ဖနပ်တိုက်ေ နရလို.ကွ။
+2 #17 sunny 2012-06-17 15:54
စွမ်းရည်ပြခဲ.တဲ.မြန်မာ.ရေတပ်မတော်ဆိုတာ ဘယ်ရာက်သွားလဲရေ တိမ်နစ်သွားတာတစ်စီးပဲကျန်တော.တာထင်တယ် နယ်ချဲ.တွေပြန်လာရင်တော .မျိုးပျောက်တော.မယ် ကယ်ကြပါအုံးပေါ.
+3 #16 ko han 2012-06-17 15:53
လွတ်တော်ဥကဋ္ဌဦးေ ရွှမန်းပြောသလို ပြည်သူတွေသာ အာဏာအရှိဆုံးဆို ရင် ပြည်သူတွေပြောတဲ့ အတိုင်း ပဲဆောင်ရွက်ပါလို့ တိုက်တွန်းပါရစေ ။
+7 #15 honey 2012-06-17 15:39
နောက်ပြီးရိုဟင် ဂျာအကြောင်းကိုလ ည်းသိပ်ပြီးနားမ ရှင်းဘူး။
ခုတော့အလုံးစုံသိသွားပြီ။နိုင်ငံတော်အစိုးရကအရေးကြီးတဲ့
အမျိုးသားရေးကိစ္စကိုပြည်သူသိအော င်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြော
သင့်တယ်။ဒီလောက် မိုက်ရိုင်းစော် ကားနေတာဘယ်လိုစိ တ်နဲ့သူတုိ့ကို
လက်ခံထားမှာလဲ။ေ ခွးအကောင်ရေများ များလက်ခံထားရင် တောင်
အနည်းလေးခြံစောင့်ပေးတယ်။ကျေးဇူးသိတက်အုံးမယ်။
ဗုဒ္ဒဘာသာနိုင်ငံ မှာခိုလှုံနေရသေးတယ်။လူပါးဝလိုက်တာ
သူတို့မူဆလင်နို င်ငံမှာဗုဒ္ဒဘာသာ လူမျိုးတွေအတွက် စေတီပုထိုးလေးတောင်
ထားခွင့်ပြုလို့ လား။မပြည့်ဝတဲ့စိတ်တွေနဲ့ကိုးကွ ယ်မှုကဆန့်ကျင်ဘ က်
ဒါကိုတောင်မြန်မာပြည်မှာအစ္စလာမ် ကိုလက်ခံပေးထားတာ
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ေ တွကျေးဇူးတ၇ားနားလည်သင့်တယ်။
တချို့ဆိုဘာသာရေးအယူသီးလွန်းတြာ မန်မာအိမ်ကေ၇တော င်မသောက်ဘူးတဲ့။ သူတို့ဘုရားမကြိုက်ဘူးတဲ့။သူတို့ ဘုရားကလည်းမြန် မာတပြည်လုံးကရေကိုသိမ်းကြုံးသော က်ပြီးမြန်မာမြေ ပေးမှာသေတော့ကြိုက်လား။
+4 #14 U Win Tin 2012-06-17 15:37
မြန်မာတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စု တွေထဲမှာ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ ဘယ်တုံးကမှ လုံးဝ၊လုံး၊မရှိ ခဲ့ပါဘူး။ မြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့စိတ်ရင်းစေ တနာကောင်း
တာကို အခွင့်ကောင်းယြူ ပီး အရိပ်နေနေ အခက်ချိုးချိုးလုပ်တဲ့
ရိုဟင်ဂျာများကိုမြန်မာ့မြေပေါ်မှာလုံးဝ၊ လုံးဝလက်မခံသင့် ပါဘူး။ သူတို့ကိုလက်ခံရ င် အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာပျောက်ကွယ် သွားနိုင်တဲ့ ဆိုးကျိုးများသာ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါ တယ်။ အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာမပျောက်ကွယ်ရလေအောင် မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံး လက်တွဲညီညီဝိုင်းဝန်းစောင့်ရှော က်ကြပါစို့။
+2 #13 zawzaw 2012-06-17 14:18
အရိပ်လဲခို အကိုင်းလဲချိုးတဲ့ ဒီကုလားတွေကို တို့မြေပေါ်မှ အမြန်မောင်းထုတ် ကြ။
+6 #12 အညာသား 2012-06-17 13:46
+5 #11 thatha 2012-06-17 13:44
they are criminals,fled after committing crimes.now kicked back by bangladesh and no where to go.Ungrateful to us.don't let them in.
+16 #10 မောင်တည်ကြည် 2012-06-17 13:39
ဘင်ဂါလီ များအားရခိုင်ြေ မ(မြန်မာ့မြေပေါ်)တွင်ခြေချခွင့် မပြုသင့်ပါရခို င် တိုင်ရင်းသားများအပေါ်တွင် ခေတ်အဆက်ဆက်မှရက်စက်ယုတ်မာ စော်ကားမှု့ များ(ယာရှင်ကို မျောက်နှင်ခြင်း မှ)ပြုလုပ်ခဲ့ကြ သည်။ယခုလည်းမြန် မာနိုင်ငံ၏တရားဥ ပဒေများချိုးဖော က်ပြီးရက်စက်ကြမ်းကျုပ်စွာသတ်ဖြ တ်၊မီးရှို့ ၊လုယက်ခြင်းများပြုလုပ်နေခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ နောင်အနာဂတ်တွင် လည်းတိုင်းရင်းသားများအားဆက်လက် ကောင်းကျိုးပေးမ ည်.သူများမဟုတ်သည်ကိုယခုလုပ်ရပ်ကသက်သေပြသတိပေးနေပြီဖြစ်သည်။နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာ ယာပြီး ခေတ်မှီဒီမိုကရေ စီနိုင်ငံတည်ဆော က်ရေးတွင်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည့် အပြင်တရားဥပေ။၁ ၆နှစ်အောက်လူငယ် အရွယ်များပင်တက် ကြွစွာမီးရှိ့ ခြင်းလူကြီးများနှင့်အတူအကြမ်း ဖက်လုပ်ငန်းများ တွင်အကြောက်တရား ကင်းမဲ့စွာပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နေ သည်ကိုတွေ.မြင်ရပါသည်။
+9 #9 မောင်တည်ကြည် 2012-06-17 13:19
ါဒကိုအကြိမ်ကြိမ်ချိုးဖောက်ခြဲ့ ကသည်
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 2:12 AM No comments:
BPHWT ဒါရိုက်တာ စောဝင်းကျော် Van Heuven Goedhart ဆ...
ရသေ့တောင် ရခိုင် တိုင်းရင်းသား ၁၁ ဦး အလောင်း ကို ...
“ငါတို့သည် ကျဆုံးလေပြီးသော တပ်မတော်သားတို့၏ သစ္စာကိ...
ထောင်ဒဏ်တသက်တကျွန်းကျ အီဂျစ်အာဏာ၇ှင်ဟောင်း မူဘာရက်...
ဘင်္ဂလီမူဆလင် မော်တော်ဘုတ် ၄၂ စီး ကမ်းကပ်ခွင့်တောင်း...